Optimizaci Del Sitio Multilingüe Para Diferentes Regiones: La Guía De Semalt
Na ahịa nke azụmahịa nke dijitalụ, ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe dị iche iche (SEO), ị ga-ahụ maka ahịa ahịa na Internet. Anyị na-enyere anyị aka ịbanye na ebe nrụọrụ weebụ na-arụ ọrụ na kọmputa ma na-enyere anyị aka ịchọta ọtụtụ uru nke Internet. Las onyeas que ejecutan SEO pueden preguntarse cómo el enfoque multilingüe afecta sus clasificaciones. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ị na-enweta ọtụtụ webmail na kọmputa gị, ị ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-akwado ya.
El SEO na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe ọ bụla na-emepụta. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ, ị nwere ike ịhazi ọtụtụ multilingual web site, nke a na-emekarị ka ọ bụrụ na ị nwere ike ịchọta. El experto de Ọkachamara , Ross Barber, nke brinda valiosos consejos nke SEO sobre cómo puede configurar un sitio web multilingüe exitoso, na-eme ka ọ bụrụ na SEO na-esote ya.
1. Ihe nchịkọta akụkọ
Ọtụtụ ndị mmadụ na-enweta ọtụtụ asụsụ, nke na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka ha na-emekọ ihe. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ ga-eme ka ị nweta ihe ọ bụla. Ị nwere ike ịmepụta ihe a na URL na URL, nke na-eme ka ọ bụrụ na ị nwere ike ịchọta ihe ọ bụla dị na peeji nke. Ntuziaka Google na-eme ka ọ bụrụ na ị nwere ike ịmepụta ihe na weebụ. Dị ka ihe atụ, Google recomienda wear anotaciones "rel = alternatehreflang" ma ọ bụ nke a, dị ka a na-eme mgbanwe dị iche iche. N'enyeghị ya aka, ọ na-esiri ike iji URL wepụta ihe ndị ọzọ na-emekarị, dị ka a na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla. Ị nwere ike ịmepụta URL ma ọ bụrụ na ị na-echekwa web.de na-egosi na ị nwere ike ịmepụta ihe dị iche iche.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịchọta ọdịnaya nke ọdịnaya na-agụnye na-esote. Las Herramientas webmasters nke Google tienen na nke online mmekọrịta n'etiti ha. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ generic (TLD) como .com, .org, .net..etc. Sin embargo, las páginas nativas de un idioma o país akpan akpan pueden tener:
Subdominios específicos del país. N'ihi ya, "jp.mywebsite.com" na internet nke Japon,
A na-enweta akara ngosi (ccTLD) nke kachasị elu. Maka ọrụ, www.mywebsite.de para una versión alemana y,
Usando subdirectorios. Maka ọrụ, www.yoursite.com/nl para orientar los visitantes de Holanda.
3. Ntughari na mpaghara mpaghara mpaghara
Ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe ọ bụla n'ime ndị ọzọ na-ezigara gị ọdịnaya, anyị ga-eleba anya na nke a na-eleta anya na-eleta anya. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ, ọ bụrụ na ị nwere ike ịchọta onye ọ bụla na China, ị nwere ike ịchọta onye ọ bụla na-ezigara gị web site na Google web site, na-edepụta china de la page. Ọ bụrụ na Google na-arụ ọrụ ụgbọ mmiri na-enweghị ihe ọ bụla, ọ na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe ọ bụla. Dị ka ihe atụ, ị nwere ike itinye ọdịnaya na weebụ.
4. Nchịkọta nchịkwa nke multilingual
Google recomienda na-ebute amaokwu site URL. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịmepụta weebụ, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-aga na ibe weebụ. Nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụghị Google na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-atụgharị uche na ya.
Ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-enyere gị aka. Configurar ebe nrụọrụ weebụ nke comercio electrónico es más fácil que abrir una tienda física. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe, ọ bụ ihe enyemaka dị mkpa nke SEO maka iji ahịa na-eme ihe n'ịntanetị. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe, ị nwere ike ịmepụta otu webmail multilingual, ma ọ bụrụ na ị na-achọghị, ọ bụghị perjudic al SEO. N'ihe a na-eme, a na-enyocha ihe ndị a na-enweta site na ndị mmadụ na-ahazi na-eduzi ndị mmadụ. Nke a na-eme ka ndị mmadụ na ndị mmadụ na ndị ọzọ na-elekọta mmadụ na ndị mmadụ na ndị ọzọ na SEO Source .